Tontolo_iainana · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Jona, 2018
Maraoka 30 Jona 2018
Azia Atsimo 29 Jona 2018
Niaina tondra-drano nandritra ny herinandro noho ny oram-batravatra ny faritany miisa 13 tany Indonezia. Namoizana ain'olona miisa 14 ny loza nitranga raha telo hafa kosa no tsy hita . Olona mihoatra ny 50.000 no voatery nafindra toerana. Nihoatra ny roa metatra ny rano tao Jakarta, renivohitr'i Indonezia.
Amerika Latina 24 Jona 2018
Tamin'ny 2 Martsa 2011, nisy horohorontany nahatratra 5,5 amin'ny mari-pandrefesana Ritcher tany amin'ny faritr'i Antioquia, any avaratr'i Kolombia. Ny fisian'ny horohorontany vao fantatry ny maro ny kaominin'i Necoclí, toerana nisy ny ivony.
Nizeria 22 Jona 2018
Afrika Mainty 19 Jona 2018